တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ကိုပြူးကျယ်သို့ ပေးစာ … အပိုင်း (၁၅)
ကိုပြူးကျယ်သို့ပေးစာလည်း ဘာလိုလိုနဲ့ (၁၅) ပိုင်းရှိနေပါပြီ။ ဒီပေးစာကို ဖတ်သူတွေ ငြီးငွေ့ကောင်း ငြီးငွေ့မယ်၊ မဖတ်ဘဲ ကျော်ချင်လည်း ကျော်သွား မယ်။ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေလို့ ထင်လိုက ထင်ကြမယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းငယ်သော ကဗျာချစ်သူတွေ နှစ်သက်စွာ ဖတ်ရှုကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျမ အားထုတ်ရကျိုး နပ်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပေးစာအပိုင်းလေးတွေ ကို ကျမ ကျေနပ်စွာ ဆက်ရေးနေပါဦးမယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တပတ်ကျော်က ရတုစပ်နည်းကိုပြောတဲ့အခါ (၁) အမည်အားဖြင့် (၂) အမျိုးအစားအားဖြင့် (၃) ပိုဒ်ရေအားဖြင့် (၄) အချီအချအားဖြင့်ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခု ဆက်ပြောမှာက …
V. အက္ခရာလုံးရေ အားဖြင့် …
ရတုကဗျာရဲ့ အပိုဒ်ပေါင်းများစွာတို့မှာ အချပိုဒ်ကလွဲလို့ ကျန် အပိုဒ်ငယ်တိုင်းမှာ အက္ခရာ ၄-လုံးစီ အတိအကျ ထားရှိစေရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ မပေါ်လွင်တဲ့ အသံရှိတဲ့ အက္ခရာဆိုရင်တော့ ၅-လုံး ၆-လုံးလည်း ထားနိုင်ပါတယ်။ ရေတွက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီလိုအက္ခရာ ၂-လုံးကို ၁-လုံး၊ ၃-လုံးကို ၁-လုံး အနေနဲ့ ရေတွက်ရပါတယ်။
အချပိုဒ်တိုင်းမှာတော့ အက္ခရာ ၇-လုံး၊ ၉-လုံး၊ ၁၁-လုံး၊ ၁၅-လုံး၊ ၁၉-လုံး၊ ၂၅-လုံး၊ ၃၅-လုံး တခုခုသာ ထားရပါမယ်။ ဒီ့ထက်ပိုလို့ လျော့လို့ မထားသင့်ပါဘူး။
VI. အစပ်ကာရန်အားဖြင့် …
တပိုဒ်နဲ့ တပိုဒ် ကာရန်ကူးဆက်ပုံမှာ အစပ်၆-ပါး ရှိတဲ့အနက် ၃-ချက်ညီ စပ်နည်းနဲ့ စပ်တာဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲလို့ ဆိုထားပါတယ်။ ၃-ချက်ညီ စပ်နည်း ဆိုတာကတော့ ကာရန်ကို ၄၊ ၃၊ ၂ နဲ့ ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။
- + - x
- x - #
အဲဒီပုံစံပါ။ အပေါင်းလက္ခဏာ ( + ) နဲ့ အမြှောက်လက္ခဏာ ( x ) ပြထားတဲ့ နေရာက အက္ခရာကို အသတ်တူ ကာရန်တူ စပ်ခြင်းကို သုံးချက်ညီ စပ်နည်းလို့ ဆိုထားပါတယ်။
VII.လေပြင်းလေလျော့ အားဖြင့် …
ပျို့, ကဗျာ, လင်္ကာ, သီချင်း ဟူသမျှတို့ကို ရွတ်ဖတ် သီဆိုတဲ့နေရာမှာ လေပြင်း လေလျော့ဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အဓိက အချက်ကြီးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
လေးလုံး တပိုဒ် ထားပြီး ရေးသားရတဲ့ ရတုမှာ မ-ပိုဒ်ဟူသမျှရဲ့ အဆုံးအက္ခရာ မှာ အာ-အီ-အူ စတဲ့ လေလျော့သံအက္ခရာတို့ကိုသာ ထားရှိရပါမယ်။ တကယ်လို့ လေပြင်းသံထားမိရင်လည်း လေလျော့ကဲ့သို့သာ သီဆိုရပါမယ်။
စုံပိုဒ်ဟူသမျှရဲ့ အဆုံးအက္ခရာမှာတော့ အား-အီး-အူး စတဲ့ လေပြင်းသံ အက္ခရာ တို့ကိုသာ ထားရှိရပါမယ်။ လေလျော့သံ ထားမိရင်လည်း လေပြင်းသံကဲ့သိုသာ သီဆိုရပါမယ်။
စသဖြင့် လေပြင်း လေလျော့ တကျော့စီ ရေးစပ်ရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် အက္ခရာကာရန် ဘယ်လောက်မှန်မှန် သီဆိုတဲ့အခါ စည်းဝါး မကိုက်ဖြစ်တတ်လို့ သတိမူသင့်ပါသတဲ့။
VIII. အပြစ်ဒေါသအားဖြင့် …
ပဓာနဖြစ်တဲ့ အစပ်ကာရန်ဌာနတို့မှာ ၀က်နင်း ခွါထောက် အပြစ်တို့ကို ရှောင်ကြဉ် ရေးသားရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
၀က်နင်းဆိုတာက … ဥပမာ ဆိုရင်
နန္ဒကဗျာ၊ ကျမ်းကဗျာ၊ သညာ ကြိုင်သင်းထုံ။
အဲဒီစာပိုဒ်က (ဗျာ - ဗျာ - ညာ) ကာရန် ၃-ချက်မှာ အရှေ့ ၂-လုံးဆက်တိုက် အသံတူ စာလုံးတူ စပ်ဆိုထားတာမျိုးဟာ ၀က်နင်းဒေါသ သင့်ပါတယ်။
နန္ဒကဗျာ၊ ဤကျမ်းစာ၊ ကဗျာ ဖွဲ့နည်းစုံ။
ဒီမှာတော့ တလုံးကျော် ထပ်တူညီ ဖွဲ့ဆိုထားတာကြောင့် ခွါထောက် ဒေါသသင့် ပါတယ်။
ဒီလို ၀က်နင်းနဲ့ ခွါထောက်စပ်ခြင်းမျိုးကို ကို မစပ်သင့်ဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့ (၈) ပါးကို အောက်ပါအတိုင်း ဥပဒေသ ဆောင်ပုဒ် ဧကပိုဒ်ရတုလေး ရေးဖွဲ့ထားပါတယ်။
ဘယ်ညာ ပြောင်းလှည့် စပ်မြဲတည်း။ … ။
ဒီဥပဒေသ ဆောင်ပုဒ်မှာ (အက္ခရာလေးလုံး၊ ထားမြဲထုံးတည့်) လို့ဆိုထားပြီး အက္ခရာလေးလုံး ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်မှာ ၅-လုံးဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အက္ခရာ = အက်ခရာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ၃-လုံးအနေနဲ့ မယူဘဲ ခ-သံက မထင်ရှားထာကြောင့် … အက် (၁) + ခရာ (၁) = ၂-လုံး အနေနဲ့သာ ယူရပါ မယ်။
ဖော်ပြထားတဲ့ ဥပဒေသဆောင်ပုဒ် ရတုဟာ အချီတပိုဒ် အချတပိုဒ်သာ ထားပြီး ရေးသားထားတဲ့ ရတုဖြစ်လို့ “ဧကပိုဒ်ရတု” လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီတပတ်တော့ ဧကပိုဒ်ရတုနဲ့ပဲ ကျေနပ်ကြပါတော့။ ရတုအမျိုးအစား အပြားပြားနဲ့ နမူနာ ရတု များကိုတော့ လာမယ့် ရက်သတ္တပတ်များမှာ ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါမယ်ရှင်။
ကိုပြူးကျယ်နဲ့တကွ မြန်မာစာချစ်သူအပေါင်း … ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ … ။
Posted by မေဓာဝီ at 7:07 AM
Thanks Ma May.
Please let me link in forum.
6/20/2007 7:17 AM
အစ်မရေ - Sunday Meeting အတွက် ထပ်ဖိတ်တာပါ။ ကျွန်တော့် အိုအေစစ်မှာလည်း ဖိတ်စာဝေနေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Mr.Pooh @ အေးချမ်း
6/20/2007 1:57 PM
မမေရေ...ဟဲဟဲ...ကိုပြူးကျယ်ဆိုတော့ ညီမလည်း ငြိမ်နေတာ...:P
သာမန်အားဖြင့်တော့ ပို့ချချက်ဆန်တဲ့ ဒီပို့စ်တွေက ပျင်းစရာကောင်းနိုင်စရာရှိပေမယ့် လေ့လာချင်သူတွေအတွက်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာပါ မမေ။ သုံးချက်ညီ ရတုစပ်နည်းက စပ်ကြည့်ချင်စရာကောင်းတယ်။
6/21/2007 2:01 AM
မပျင်းဘဲ ဖတ်တဲ့လူ ချိပါဒယ်ခည.။ ဒီမှာလည်း တစ်ယောက်။
6/21/2007 4:57 AM
Thanks Very much. It is very useful me to learn such of things.
6/23/2007 1:28 AM